SAWIRRO: Masjidka Hagia Sophia oo berri salaadda JIMCAHA lagu dukan doono 86 sanadood kaddib (Diyaarintii ugu dambeysey & hab-raaca) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SAWIRRO: Masjidka Hagia Sophia oo berri salaadda JIMCAHA lagu dukan doono 86...
SAWIRRO: Masjidka Hagia Sophia oo berri salaadda JIMCAHA lagu dukan doono 86 sanadood kaddib (Diyaarintii ugu dambeysey & hab-raaca)
(Istanbul) 23 Luulyo 2020 – Kaddib 86 sanadood kaddib oo ay matxaf ahaan u shaqaynaysey waxaa berri xarigga laga jari doonaa Hagia Sophia oo ku taalla Istanbul oo salaadda Jimcaha lagu dukan doono, taasoo ay soo dhoweeyeen Muslimiin badan oo dunida ku firirsan.
“Waxaannu ognahay inuu jiro damac ah inay dalxiisku doonayaan inay ku dukadaan Hagia Sophia,” ayuu yiri Barasaabka Istanbul, Ali Yerlikaya, isagoo sheegay inay qaadayaan tillaabooyinka loo baahan yahay.
Yerlikaya ayaa sheegay inay dhigi doonaan 11 isbaaro oo amaanka lagu sugo, iyadoo maanta lagu hayo inay dadku dhaqso u galaan masjidka, iyadoo dadka laga codsaday inaysan soo qaadan boorsooyin.
Waxaa sidoo kale la baari doonaa heer-kulka dadka iyada oo la hubinayo in uu qof kasta maasgare xiran yahay. Waxaa iman doona 17 goobood oo caafimaadka lagu baarayo iyo 736 shaqaale caafimaad iyo 101 ambalaas iyo dayuuradaha qumaatuga u kaca oo heegan ah.
Jidadka masjidkan taariikhiga ah soo gala ayaa iyagana la xiri doonaa, maadaama la filayo dad aad u fara badan oo iman doona. Waxaa xitaa lasoo dhowayn doonaa dadka aan Muslimka ahayn.
Previous articleGOOGOOSKA: SS Lazio vs Cagliari 2-1
Next article”Ujeedku waa in la dhoco hantida Astaan TV!” – Maxay tahay sababta ka dambeeysa xiritaanka Milkiilaha Astaan? (Maamulka Somaliland oo sameeyey wax ay ka xishoodeen hoggaamiye kooxeedyadii)